Lenovo na-enye Phab 2 Pro, nke mbụ Project Tango mobile | Gam akporosis
Lenovo na-ekwupụta ọkwa mbụ nke ekwentị Tango ekwentị: Phab 2 Pro maka $ 499
Project Tango bụ ọ bụ ihe Lenovo na-ezo iji gbalịa iru ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ na-achọ ụdị smartphones ndị ọzọ. Anyị amaworị na PHAB 2 Pro ga-abụ onye mbụ ga-abịa Project Tango, teknụzụ nke depụta ebe anyị nọ ekele nchikota nke ihe mmetụta ya na igwefoto.
Ọ bụ ugbu a na, na Lenovo TechWorld na San Francisco, ụlọ ọrụ ahụ mechara ekwuputala ngwaọrụ mbu nke Tango: Phab 2 Pro. Ewezuga nkọwa, nke a maara na akụkụ site na nkwụsị, anyị amataworị ọnụahịa ya na nnweta ya. N’ọnwa Septemba enwere ike ịzụta ya maka $ 499.
1 The mbụ Project Tango ọnụ
1.1 Phab 2 Pro Spec Ndepụta
The mbụ Project Tango ọnụ
Phab 2 Pro bụ ngosiputa ihuenyo QuadHD nke 6,4 nke anụ ọhịa nwere sensọ zuru oke iji nye ekwentị ohere ịmụ banyere ohere ọ dị. Ka anyị na-eji ya, ị ga-amata ebe ndị ahụ nke ọma ma ị nwere ike iji ya jụọ ajụjụ ndị dị mgbagwoju anya gbasara oghere ebe ọ dị. Ngwaọrụ pụrụ iche maka ndị na-achọ ime ụlọ, ndị na-ere ahịa, ndị mmepe egwuregwu na-abawanye ụba na ndị ọkachamara ndị ọzọ ga-achọta ọnụ a nnukwu ngwaọrụ maka ndụ ha kwa ụbọchị.
Wezụga Phab 2 Pro n'onwe ya, Google's Johnny Lee kwupụtara na Project Tango ga-amara aha Tango. Lee kpughere akara ngosi ọhụrụ nke a ga-ahụ na ngwaọrụ ndị ọzọ na Tango-ọnwa ndị na-abịanụ. Tango ga-enwekwa nkwado site na gam akporo.
Laghachi azụ na ihe ọnụ ọnụ ya na-enye, Phab 2 Pro nke ejiri aru di iche iche mara ọla edo na agba ntụ. O nwere igwefoto 8MP n'ihu, kamera azụ nke 16MP RGB, igwefoto infrared na oghere "fisheye" nke na-agbakwunye na ihe mmetụta dị mma ọzọ, gụnyere ihe mkpịsị aka mkpịsị aka. Na batrị ya nwere 4.050 mAh nwere ikike ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na Snapdragon 652 mgbawa nwere 4GB nke RAM.
Phab 2 Pro Spec Ndepụta
6,4-anụ ọhịa QHD ihuenyo (2560 x 1440)
Qualcomm Snapdragon 625 mgbawa kụrụ na 1.8 GHz
64GB n'ime ebe nchekwa
Igwefoto 16 MP, igwefoto TOF, ihe mmetụta infrared fisheye maka mmejuputa atụmatụ Tango
Ikuku njikọ: Wi-Fi, Bluetooth, LTE
Batrị: 4050 mAh
Arọ: gram 250
Akụkụ: 88,57 x 179, 83 x 6,96-10,7mm
Lenovo Phab 2 Pro ga-adị na ahịa US site na Septemba maka $ 499.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » Lenovo na-ekwupụta ọkwa mbụ nke ekwentị Tango ekwentị: Phab 2 Pro maka $ 499
Sergi Sr. gam akporo dijo
6,2 sentimita asatọ ruo n'ókè a Smartphones dị ugbu a, ụdị Smartphones ga-adị ka 4 fleas (1)
Zaghachi Sergi Sr. gam akporo
* 4 Inches ọzọ «Sector» nke ọha na eze na-achọghị ka a etiti n'etiti 5 / 5,5 Inches ọ bụ ezie na e nwere abụghị nke ukwuu dị iche
Larry Page na etinye ego ya na ugbo elu na-efe efe